FA-ga oo go’aan ka gaari doona markii uu Garsoore Clattenburg faquuqay John Mikel Obi. - Caasimada Online
Home Warar FA-ga oo go’aan ka gaari doona markii uu Garsoore Clattenburg faquuqay John...
FA-ga oo go’aan ka gaari doona markii uu Garsoore Clattenburg faquuqay John Mikel Obi.
Xiriirka Kubada Cagta ayaa rajo laga qabaa inay dhameystiraan baaritaankooda ku aadan dacwada jinsi faquuqa ah ee uu garoore Mark Clattenburg ku aflagaadeeyey John Mikel Obi, waxaana la filayaa in lasoo afjaro ka hor dhamaadka isbuuca.
Ciyaartoyda Chelsea, marka lagu daro Mikel iyo Ramires ayaa isniinta u marqaati furi doona Jenni Kennedy, oo ah madaxa qolyaha wax u baaraya FA-ga. Waxayna hada dareenkeeda u weecisay dhanka garsoore Clattenburg. Sida uu qoray wargeyska Daily Mail.
Madaxda FA-ga, ayaa cadaadis saaran yahay si ay u gaaraan go’aan dhaqso ah, waxaana macquul ah inay xaqiijiyaan eedeyntooda ka hor dhamaadka ibuucan.